Chili, ukhiye omusha wokulwa nokukhuluphala - i-Afrikhepri Fondation
Li-leptin (kusuka ku-leptos yesiGreek, ethambile) kwesinye isikhathi eyaziwa ngokuthi yi-satiety hormone, iyi-hormone ye-peptide elawula ukugcinwa kwamafutha emzimbeni kanye nesifiso sokulawula umuzwa wokuhlukumezeka. Le hormone itholwa izicubu ezimhlophe ze-adipose okuthi, ngaphezu kokusebenza kwayo kokugcina kanye nokuhlanganisa ama-acid amaningi, futhi kunomsebenzi obaluleke kakhulu we-endocrine. I-Leptin iyi-hormone ye-peptide, eyakhiwa yi-167 amino acid futhi itholakala kumagundane amaningi.
Ihlukaniswe yi-adipocytes hhayi i-endocrine gland, i-leptin akuyona i-hormone ekhuluma ngokuphelele, kepha isenzo sayo sohlobo lwe-hormonal senza ukuthi ikwazi ukuwuhlukanisa kanjalo. Le hormone ilawula ukuqina nokuqina kwemisipha, ngokunamathela kwi-receptor etholakala kwi-hypothalamus. Izinga leptin egazini lilingana ngqo nezinga lomzimba lomzimba. Lapho simelana nemiphumela yaleli hormone khona-ke sithola isisindo. Ukumelana ne-leptin kuzibonakalisa ngandlela thile njengokumelana ne-insulin, isandulelo sokuthayipha isifo sikashukela II. Ngakho-ke, isifo sikashukela sohlobo II singumphumela wokudla okumpofu kakhulu ocebile ushukela namafutha. Amaseli ahlala ehlushwa i-insulin ukuze kungenwe ushukela esitokisini (izicubu nesibindi) bese ekugcineni amelana ne-insulin. Okufanayo kuhamba nge-leptin. Njengoba kunamafutha aphezulu kumuntu okukhulunywa ngaye, ukugxila kwe-leptin kuphezulu kakhulu. Ngakho-ke amaseli agcwala i-leptin ekugcineni okuzodala ukumelana naleli hormone.
Kodwa okuphambene nakho kuyiqiniso. Abantu abanamafutha aphansi banomfutho ophansi we-leptin, kodwa bazwela kakhulu. Usuqonde nje ukuthi kungani ukudla okuhambisana nokuvinjezelwa okunamandla kakhalori kungalingani ngokuphelele imetabolism yakho. Ungalokothi ukhohlwe ukuthi umzimba ungumshini oguquguqukayo.
Ukuvinjelwa kwekhalori kuthathwa njengokucindezela komzimba ngenkathi ukusetshenziswa kwamandla kungabonakali ngale ndlela. Ngakho-ke, lapho kukhulu umkhawulo futhi kuqhubeka isikhathi eside, ukuvumelana nalokho ngokweqile kwama-hormone kuzoba umphumela.
Injongo yokudla okunempilo nezindlela zokuphila ezinempilo. Iqiniso elilula lokudla kangcono ngakho-ke liyoba nomthelela enanini lamandla angena. Ukudla okunempilo kuvame ukwehla kakhulu kilojoule kunokudla okumnandi kakhulu nokunamafutha.
Ukudla kwezemidlalo nokulinganisela ne-chilli?
Isithako esikhulu esisebenzayo ku-chilli singasheshe sibe yinto entsha futhi edumile yokudla ekudleni ngenxa yokuthuthukisa amandla we-metabolism, njengoba ucwaningo olwenziwe yiqembu lase-University of Wyoming e-United States selibonisile. Le ngxenye yenza sikwazi ukushisa amanoni ngokungasebenzi futhi ngakho-ke ukulwa nokukhuluphala.
I-pepper iqukethe i-capsaicin, i-molecule esiza ukulwa nokuncipha kwesisindo futhi ilahlekelwe isisindo kalula.
Abaphenyi basikisela ukuthi ama-supplements asuselwa ku-capsaicin (amakhemikhali akhona ku-chili pepper obangela umuzwa ovuthayo) angaqeda isidingo sokunciphisa ukubamba kwe-calorie. Isenzo sale khompiyutha silula, kuvumela ukuguqula "amafutha amabi" abe muhle amafutha asundu, njengoba abacwaningi bechaze ngesikhathi kwethulwa umsebenzi wabo engqungqutheleni yonyaka ye I-Biophysical Society eBaltimore, nokuphela ngoFebhuwari 11.
Emizimbeni yethu, amangqamuzana amhlophe amhlophe agcina amandla bese amaseli wamafutha ansundu abangela imishini ye-thermogenic (ukushisa okukhiqizwe yi ukushisa fat) ukushisa amanoni agcinwekusho omunye wabalobi bocwaningo, uVivek Krishnan. Isengezo sokudla esakhiwe nge-capsaicin sisusa ukuzuza kwesisindo okuhambisana nokusetshenziswa kokudla okucebile ngokwenza kahle kokubakhona kwamangqamuzana ansundu, amandla akho okushisa enza ukuba sikwazi ukushisa amanoni ngokungasebenzi.
I-Capsaicin, i-fat burner ephumelelayo kakhulu kumagundane
eziningana izifundo wayekade akhombisa ukuthi amaseli amhlophe angaguquka abe nsundu futhi okuphambene nalokho, kuvame ukubangelwa izinguquko zokushisa, kepha ucwaningo oluvela e-University of Wyoming lukhombisa ukuthi i-capsaicin ibangela ukuba amaseli amhlophe qwa abe nsundu.
Ukwenza ucwaningo lwabo, iqembu liphakamise ukudla okunothile kakhulu kwamagundane kanye nedosi elincane le-capsaicin (0,01%). UVivek Krishnan nozakwabo bathola ukuthi kulo mongo amagundane awazange athole isisindo ngoba umsebenzi wawo we-metabolic wawusheshile. Imiphumela yaba mihle cishe konke namagundanekuphela labo abangenakho i-capsaicin ne-vanilloid receptor (ebizwa nge-TrpV1) abayisisindo.
Iqembu njengamanje lisebenzela ukuthuthukisa isengezo sokudla ngokusekelwe ku-capsaicin esizolwa nayoobésité. Amalungu ayo athemba kakhulu futhi acabange lokho izivivinyo zokwelashwa kufanele iqale ngokushesha. Abaphenyi sebethumele isiphakamiso selungelo lobunikazi lendlela yabo yokuletha i-capsaicin emzimbeni. [Wpdiscuz-feedback id = "xp9yg2whos" question = "Ucabangani wena?" kuvuliwe = "0 ″] [/ wpdiscuz-impendulo]
I-CAPSIMAX * i-315 mg / 60 yamaphilisi
29,00€ kukhona kusitoki
3 okusha kusuka ku-29,00 €
Thenga i-29,00 €
kusukela ngoSepthemba 18, 2020 8:48
CAPSIMAX 315 mg / 60 amaphilisi
I-Thermogen enamandla ishisa amanoni namandla
Isisindo (ukushiswa kwamafutha, i-slimming)
Ikhwalithi ihlolwe ngesitifiketi sokuhlaziywa
I-Spirulina - Ithuthukisa amasosha akho omzimba